काठमाडौं, फागुन १९: नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ । शेयर बजार १२ दशमलव ६१ अङ्क बढेर १ हजार ३ सय २९ दशमलव ४१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । सो दिन कारोबार रकम न्यून प्रतिशतले बढेर रू. ४१ करोड ११ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. १४ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ ।
होटल समूहको परिसूचक ६ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स (आरएसआई) न्यूट्रल जोन अथवा ५४ दशमलव १७ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा होटल समूहको शेयरको खरीद विक्री चाप सामान्य रहेको देखाउँछ । जलविद्युत समूहको परिसूचक १ दशमलव ९२ प्रतिशत र बीमाको १ दशमलव ६४ प्रतिशत बढेको छ । साथै, बैङ्किङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९५ प्रतिशत, विकास बैङ्कको शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७९ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको छ ।
नेप्सेमा कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ९२ कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेको, ३० कम्पनीहरुको मूल्य घटेको छ भने १२ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । दिनभरीमा १ सय ३४ कम्पनीको ४ हजार ७ सय ७५ पटकको व्यापारबाट ९ लाख २८ हजार २ सय १० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेर २ सय ८८ दशमलव ७८ अङ्क पुगेको हो । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४५ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सामान्य रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो ३ दशमलव शून्य ६ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।